Trangam-piarahamonina : Ankizy tsy ampy taona bevoka dia hotambazana omby iray sy vola 400.000Ariary
mardi, 12 décembre 2017 15:42
Tsy nanaiky ny fangatahan' ilay tovolahy nahabevoka an-janany ny renin’ilay tovovavy mbola mpianatra izay tratry ny vohoka tsy nirina ka nametraka fitoriana eny amin'ny Zandarimaria Sambava androany maraina.
"Ny 26 jolay 2017 no nandeha fadim-bolana farany ny zanako", hoy ny reniny, taorian’io dia lasa tany Ambodihazomamy, Kaominina Morafeno nipetraka tamina Raim-pianakaviana iray izay fati-dra amin'ny Ray aman-drenin-drazazavavy, nanomboka ny volana aogositra.
Tsikaritr'ireto farany ho niova anefa ny toe-batan'ilay zazavavy nony niverina hamonjy fianarana. Noheverina ho aretina ka nentina namonjy hopitaly, kinanjo rehefa nataon'ny mpitsabo ny fizahana dia voamarina fa mitoe-jaza ilay tovovavy. Teo koa ity farany vao nilaza fa niharan'ny fanararaotana ara-nofo nataon'ny zanak'ilay fati-dran'ny Ray aman-dreniny izy nandritra ny fotoana nijanonana tany ambanivohitra.
Niaiky izany ny voatoandro ka nanao taratasy voasonia fa hanolotra omby iray matavy sy vola 400.000 Ariary ; tetsy ankilany anefa dia diso fanantenana ny amin'ny hoavin'ny zanany ilay renin-drazazavavy ka nampakatra ny raharaha amin'ny mpitandro filaminana, ilay zazavavy rahateo efa tsy noraisin’ny sekoly nianarany intsony na dia kilasy 3ème aza.